R/Wasaare Kheyre oo goor dhow kormeer ku tagay Xarunta Wasaaradda Warfaafinta – XAMAR POST
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa goor dhow kormeer lama filaan ku tagay xarunta Wasaaradda Warfaafinta, isagoo haatan kulan la leeyahay Wasiirka Warfaafinta iyo Agaasimayaasha Waaxyaha.
Kormeerkan ayaa ah kii labaad oo Ra’iisul Wasaaruhu ku tago Xarunta Wasaaradda Warfaafinta, iyadoo bishii April ay aheyd markii uu horeysay uu halkaas kormeeray.
Lama oga in Ra’iisul Wasaaraha inuu toos uga hadli doono Telefishinka iyo Raadiyaha dowladda iyo in kale.
Dowladda Soomaaliya ayaa xilligan heysata xaalado ka dhashay dhiibidii C/kariin Qalbi Dhagax oo ahaa Sarkaal ka tirsanaa ONLF, kaasoo loo gacan geliyay Itoobiya, waxaase dad badan ay sugayaan sida ay Dowladda arrintan uga hadasho.
Madaxda dowladda ayaa inta badan kormeerka ay ku tagaan xarunta Wasaaradda Warfaafinta, waxay shacabka kala hadlaan warbaahinta, iyadoo ugu dambeeyay Madaxweyne Farmaajo oo mar uu bishii la soo dhaafay kormeeray Wasaaradda Warfaafinta uu shacabka si toos ugala hadlay Telefishinka iyo Radiyaha dowladda.